यौनसम्बन्धी सपना किन देखिन्छ ? कहिलेकाहीँ सपनासँगै स्खलन पनि किन हुन्छ ?
जिज्ञासा : आर, सुनसरी
अन्य घटनाजस्तै निदाइरहेको बेलामा यौनसम्बन्धी सपना देख्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसो त यौन सपनाको क्रममा स्वप्नदोष हुन सक्ने भए पनि दुवै फरक–फरक कुरा हुन्। सधैँजसो र सबैको स्वप्नदोष हुनैपर्छ भन्ने छैन। कतिपय बेलामा अर्धचेतन अवस्थामा लिंग उत्तेजना मात्र पनि हुन सक्छ।
बैँस पुगेपछि करिब ५० प्रतिशत व्यक्तिले एक न एक पटक यौन सपना देखिसकेको हुन्छ। किशोरावस्थामा बढ्ता देखिने यौन सपना तथा स्वप्नदोषको घटना व्यक्तिअनुसार फरक–फरक हुन सक्छ। पुरुषका साथै महिलाले पनि यौनसम्बन्धी सपना देख्छन्।
यस क्रममा योनि स्राव अत्यधिक हुने तथा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने हुन्छ। यौन सपनाको क्रममा कतिपयलाई वास्तवमै यौन कार्यमा संलग्न भइरहेको अनुभूति हुन्छ। यस्तो बेला यौन कार्यमा संलग्न यौन साथी परिचित वा अपरिचित दुवै हुन सक्छन्।
बाह्य वातावरण तथा सामाजिक रीतिअनुसार मानिसले आफूमा भएको यौन चाहना दबाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय व्यक्तिको संकुचित भावना तथा हस्तमैथुनप्रतिको नकारात्मक दृष्टिले पनि यौन चाहना दबाउने हुन्छ। यसै बेला शरीरभित्रै विकसित भइरहेको यौन अवस्थाले विकल्प खोज्छ।
यस क्रममा धेरैले हस्तमैथुन गरेर आफ्नो यौन भोक शान्त पार्छन् भने कतिपयमा यौन सपनासँगै वीर्य स्खलन वा योनि स्राव भई यौन तनाव शान्त हुन्छ। कतिपयले यौन सपनासँगै स्खलित हुनै लाग्दा थाहा पाउँछन् भने कतिपयले स्खलित भएपछि मात्र आफूले यौन सपना देखिरहेको वास्तविकता थाहा पाउँछन्।
त्यसो त यौन सपना स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हस्तमैथुन गर्ने बानी तथा विवाहपश्चात् नियमितजस्तो यौन कार्यले यौन सपना कम हुँदै जान्छ। बिरलै कतिपयको भने सपनामा हिँड्ने बानीजस्तै वास्तवमा सपनामा यौन सम्पर्क स्थापित गर्ने, यौन क्रियाकलाप गर्ने बानी हुन्छ।
उमेरसँगै यौन विकासको एउटा चिह्नको रूपमा रहेको यौन सपना सबैले देख्नैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। यसले दमित यौन तनाव घटाउन मद्दत गर्ने हुनाले समग्रमा यौन दुव्र्यवहार, यौन हिंसा घटाउन मद्दत गर्छ। प्रजनन प्रणाली राम्ररी विकसित भएको अवस्थामा बारम्बार देखिन सक्छ भने कसैले चाहँदैमा यौन सपना देखिने पनि होइन।
यौन सपना देख्ने बानी घटाउन यौन परिकल्पना नगर्ने, यौन सामग्री अत्यधिक नहेर्ने, नपढ्ने, सुत्नुअघि पिसाब फेरेर तथा हातखुट्टा राम्ररी धोएर सुत्ने तथा मन शान्त पारेर सुत्ने गर्नुपर्छ। यसलाई स्वाभाविक प्रक्रिया ठानी स्खलित हुनै लाग्दा वा भएपछि यौनांगको सरसफाइमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ। भित्री कपडा फेर्ने, तन्ना वा सिरकको खोलको सरसफाइ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। परामर्शको अभावमा चिन्ताग्रस्त हुन सक्ने भएकोले मनोपरामर्शको आवश्यकता हुन सक्छ।
के हो स्वप्न स्खलन ?
स्वप्नदोष पनि भनिने स्वप्न स्खलनका क्रममा विशेषतः केटाले निद्रामा कुनै केटीसँग यौनजन्य कार्य गरेको सपनादेखि वीर्य स्खलन हुने हुन्छ। केटीहरूमा रजस्वलाजस्तै यो केटाहरूमा यौन क्षमता विकासको चिह्न पनि हो।
सपनाको दोष अर्थात् स्वप्नदोष गलत नामाकरण हो। किशोरावस्था पुगेपछि देखापर्ने यौनसम्बन्धी यो नौलो समस्यालाई चलनचल्तीमा स्वप्नदोष नै भन्ने गरिएको छ। यौन उत्तेजनासँग सम्बन्धित यो समस्या अचेतन मनको यौन परिकल्पनाको उपज पनि हो। केटाहरूको १३, १४ वर्ष लागेदेखि यौन ग्रन्थि र यौनांग सक्रिय हुन थाल्छ। किशोरीप्रति आकर्षण बढ्न थाल्छ।
स्वप्नदोषका क्रममा हुने वीर्य स्खलन कुनै गम्भीर रोग हो कि भनेर चिन्ता गर्नेको कमी छैन। त्यसो त किशोरावस्था पुगेपछि वीर्य निर्माण निरन्तर रूपमा हुन थाल्छ। यसरी निर्मित तथा संकलित वीर्य बाहिरिने प्रक्रिया हो– स्वप्नदोष।
कुनै कारणवश पर्याप्त मात्रामा यौन सम्पर्क भएन भने हस्तमैथुनको विकल्पका रूपमा स्वप्नदोष हुन सक्छ। अविवाहितको दाँजोमा कम नै भए पनि लामो समयसम्म यौन सम्बन्ध राख्न नपाएका विवाहित पुरुषमा पनि स्वप्नदोष हुन सक्छ।
यौन सपनाको क्रममा यौन उत्तेजना बढेमा स्वप्नदोष हुन सक्छ। स्वप्नदोषको समस्या व्यक्ति विशेषको शारीरिक अवस्था, मानसिकता, पोषण, वातावरण, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति, व्यवसाय, दिनचर्यामा पनि निर्भर हुन सक्छ। हप्ता दिनमा एक पटकजसो स्वप्नदोष स्वाभाविक भए पनि प्रत्येक रात वा पटक–पटक छिटो–छिटो हुन थालेमा घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ।
स्वप्नदोषको समस्या कम गर्न तथा हटाउन केटीप्रतिको यौन आकर्षण घटाउनुपर्छ। विशेष गरी, सुत्नुअगाडि यौन परिकल्पना गर्ने, यौन साहित्य पढ्ने तथा यौन सामग्री हेर्ने कार्य कम गर्नुपर्छ। यौन उत्तेजना बढाउने वस्तुबाट टाढा रहनुपर्छ। माछा, मासु, घीउ, अण्डा, अमिलो–पिरो, चिया, कफी कम खानुपर्छ।
मदिराको सेवन कम गर्नुपर्छ। बरु, हरियो सागपात, दही, मही, पानी बढी खाने गर्नुपर्छ। यसका साथै स्वप्नदोषको समस्या भएका व्यक्तिले सुत्नुअघि हातखुट्टा चिसो पानीले धुने, छिटो सुत्ने तथा सबेरै उठ्ने, व्यायाम गर्ने, दिनहुँ नुहाउने गर्नुपर्छ। सुत्ने कोठामा उत्तेजक तस्बिर हटाउने तथा राति लिंग खेलाउने बानी हटाउनुपर्छ। पढाइ र खेलकुदमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।